काँग्रेससँग जवाफ छ ? |
काँग्रेससँग जवाफ छ ?
प्रकाशित मिति :2017-05-05 09:42:03
एक ताका आन्तरिक मागको आधाभन्दा बढी अंश पूर्ति गर्ने स्वदेशी कपडा उद्योगहरु अहिले पूर्णतः धराशायी भएका छन् । सरकारी क्षेत्रका चिनी, चुरोट, सुर्ति, कपास, कपडा उद्योगहरु कोही खारेज गरियो भने कोही विगत बीसौं बर्षदेखि बन्द भएका छन् । र, त्यहाँको अरबौको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुटखसोट भएको छ । नाफामा चलिरहेका भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धी ईंटा टायल कारखानालाई निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बिक्री गरी बन्द गरियो । यी सबै गतिबिधिबाट राष्ट्रलाई कति नोक्सान भयो भन्ने कुराको हिसावै हुन सक्दैन । माओवादीले बम पड्काएर गरेको भौतिक संरचनाको क्षतिभन्दा नेपाली काँग्रेसले गैरजिम्मेवार ढंगले नीति परिबर्तन गरेर देशलाई पुर्याएको क्षति कैयौं गुणा बढी होला ।
खुला आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर एक पटक फस्टाएका निजी क्षेत्रका सावुन र बिस्कुट उद्योगहरु पनि बन्द भए ।
उदारीकरण नीति अख्तियार गरिएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंक तथा बित्त, यातायात आदि सेवा क्षेत्रमा केही प्रगति भएको अबश्य छ । तर ती क्षेत्रको बिस्तारको सँगसँगै तिनमा झाङ्गिदै गएका विकृतिहरुतर्फ आँखा चिम्लिन मिल्छ ? हाम्रो शिक्षा प्रणालीले देशमा दुई किसिमका नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु आफै सरकार भएका छन् । तिनमा सरकारको केही चल्नै छोडेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति बुझ्न डा. गोवन्द के.सी.लाई सम्झे पुग्छ । सडक जति बिस्तार भए पनि यात्रुहरु सिन्डिकेट पीडित भएका छन् । सिन्डिकेट तोड्ने हैसियत राख्ने निकाय यो देशमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । बैंक तथा बित्तीय संस्था जति थपिए पनि ती कसैगरी पनि सहर छोड्न तयार छैनन् । सुदूर क्षेत्रको अनुभवमा देशमा उही नेपाल बैंक लिमिटेड एउटामात्र रहेको जस्तो छ । तर नेपाली काँग्रेस यी तमाम विकृतिहरुको बारेमा दृष्टिबिहीन समान भएको छ । जबकि यी विकृतिहरु यति शक्तिशाली भएका छन् कि यिनका सामुन्ने सरकार नै निरीह भएको छ । त्यसैले बुझाैं नेपाली काँग्रेसमा कति इमान्दारिता छ ।